February 2021 - Sainpwar
“ စိတ်မနှံ ့ပေမယ့် ပြည်သူတွေပြေးလွှားရင်း ကျန်ခဲ့တဲ့ ဖိနပ်တွေကို လိုက်ကောက်ကာ တစ်နေရာထဲ စုပေးထားတဲ့ဦးလေး ”….
“ စိတ္မနွံ ့ေပမယ့္ ျပည္သူေတြေျပးလႊားရင္း က်န္ခဲ့တဲ့ ဖိနပ္ေတြကို လိုက္ေကာက္ကာ တစ္ေနရာထဲ စုေပးထားတဲ့ဦးေလး ” လူေတြဟာအျမဲရွင္သန္ေနရာဘဝမွာ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိၾကပါတယ္။တစ္ခါတစ္ေလ မွာ အေပၚယံလူေတြလည္းရွိသလို၊စိတ္သေဘာထားျဖဴစင္ျပီးရိုးသားတဲ့ လူေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။ ဒီေန ့ဆိုရင္လည္း စိတ္ပံုမွန္မဟုေပမဲ့ သူကူညီနိုင္တဲ့ဘက္ကေန ျပည္သူကို ကူညီေပးေနတဲ့ ဦးေလးတစ္ဦးကိုေတြ ့ခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ရဲေတြလိုက္လို ့ေျပလႊားေနစဥ္ က်က်န္ခဲ့တဲ့ဖိနပ္ေလးေတြကိုေကာက္ကာ တစ္ေနရာထဲမွာစုပံုေပးျပီး ထိုင္ေစာင့္ေပးေနခဲ့တာပါ။ေလးစားစရာဦးေလးပါ။ တစ္ခ်ိဳ ့ကေတာ့အဲ့ဒီဦးေလးကပညာတတ္လို့သိရတယ္။မသာမာသူေတြရဲ့ေအာက္လမ္းနဲ႔လုပ္လို ့စိတ္ပံုမွန္မဟုျဖစ္သြားတယ္လို့လည္းသိရတယ္။ သူေျပာေနတဲ့စကားေတြထဲမွာပညာသားပါတယ္ […]
အချဉ်ပေါင်း လိုက်လှူတဲ့ အန်တီ့ အတွက် အိမ်နဲ့ ဝင်းပါ လှူပေးမယ့် အလှူရှင် မိသားစု မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီး အခုချိန် အခါဟာ အားလုံးအတွက် စိတ်ပျက်စရာတွေ နာကျည်းခံပြင်းစရာတွေ ပြည့်နှက် နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း… ကျနော်တို့ အားလုံး အတွက် ဝမ်းသာရမယ့် အကြောင်း တရား တွေလည်း ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မတရားမှု့ကို လက်မခံတာတိုင်းရင်း သားညီအစ်ကို မောင်နှမ အချင်းချင်း အရင်လို […]
သရဏဂုံ တင်ထားပြီးပြီမို့… ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုမှာ တစ်တပ်တအားပါဝင်မယ် လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အလင်းရောင်….
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ခုချိန်မှာတော့ အနုပညာလော ထဲကို မော်ဒယ်လ် လောက မှ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် အဖြစ်သို့ ခြေစုံပစ် ဝင်ရောက် လာတဲ့ အလင်းရောင်ဟာ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အားမလျော့ဘဲ ရပ်တည်ကာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်လျက် ရှိနေတာကို အားလုံးမြင်တွေ့ရမှာပါနော်။ စတိုင်စမက်ကျပြီး ကျစ်လစ်တောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးခြင်းကို ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်လ် လောက […]
“ အတိတ်နိမိတ်တွေတော့ပြကုန်ပြီနော် ပြည်သူ့သပိတ်အောင်မြင်တဲ့ဘုရားတဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာထူခြားစွာဖူးတွေ့ရ ”…..
“ အတိတ္နိမိတ္ေတြေတာ့ျပကုန္ၿပီေနာ္ ျပည္သူ႔သပိတ္ေအာင္ျမင္တဲ့ဘုရားတဲ့ ေကာင္းကင္ယံမွာထူျခားစြာဖူးေတြ႕ရ ” အတိတ္နိမိတ္ေတြေတာ့ျပကုန္ၿပီေနာ္။မႏၲေလးၿမိဳ့ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အေနာက္ဖက္မဟာေလာကရံသီအိမ္ေတာ္ရာေစတီေတာ္ျမတ္ ယေန႔တပို့တြဲလျပည့္ေန႔ည၇နာရီမိနစ္၂၀မွာ ယခုကဲ့သို့ေကာင္းကင္ယံမွာထူျခားစြာဖူးေတြ႕ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ငယ္ငယ္ကေမေမတို့ေဖေဖတို့ေျပာတာၾကားဘူးတယ္ဖဆပလေခတ္ဆိုလားမသိဘူးသပိတ္စခမ္းကအိမ္ေတာ္ရာကေနစၿပီး ျပည္သူကေတာ္လွန္ေရးစၿပီးလမ္းမေပၚစစ္ခ်ီတာ အဲဒီတိုက္ပြဲေအာင္ျမင္သြားတယ္လို့ေျပာတယ္။ျပည္သူ႔သပိတ္ေအာင္ျမင္တဲ့ဘုရားမို့ အဲဒီေနာက္ပိုင္းစစ္အစိုးရအာဏာသိမ္းအုပ္စုအဆက္ဆက္အိမ္ေတာ္ရာေစတီေတာ္ကိုဘယ္ေတာ့မွ လာမဖူးၾကဘူးလို့ ေရွးလူႀကီးေတြေျပာတာၾကားဘူးတယ္ရွင့္ ခုဟာကလုံးဝထူးျခားခ်က္ေနာ္အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ေတာ့မည္။ unicode “ အတိတ်နိမိတ်တွေတော့ပြကုန်ပြီနော် ပြည်သူ့သပိတ်အောင်မြင်တဲ့ဘုရားတဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာထူခြားစွာဖူးတွေ့ရ ” အတိတ်နိမိတ်တွေတော့ပြကုန်ပြီနော်။မန္တလေးမြို့ စျေးချိုတော်အနောက်ဖက်မဟာလောကရံသီအိမ်တော်ရာစေတီတော်မြတ် ယနေ့တပို့တွဲလပြည့်နေ့ညရနာရီမိနစ်၂ဝမှာ ယခုကဲ့သို့ကောင်းကင်ယံမှာထူခြားစွာဖူးတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကမေမေတို့ဖေဖေတို့ပြောတာကြားဘူးတယ်ဖဆပလခေတ်ဆိုလားမသိဘူးသပိတ်စခမ်းကအိမ်တော်ရာကနေစပြီး ပြည်သူကတော်လှန်ရေးစပြီးလမ်းမပေါ်စစ်ချီတာ အဲဒီတိုက်ပွဲအောင်မြင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြည်သူ့သပိတ်အောင်မြင်တဲ့ဘုရားမို့ အဲဒီနောက်ပိုင်းစစ်အစိုးရအာဏာသိမ်းအုပ်စုအဆက်ဆက်အိမ်တော်ရာစေတီတော်ကိုဘယ်တော့မှ လာမဖူးကြဘူးလို့ ရှေးလူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတယ်ရှင့် ခုဟာကလုံးဝထူးခြားချက်နော်အရေးတော်ပုံ အောင်တော့မည်။
အချိန်မရလဲ (၂ )မိနစ်စာလောက် ခဏဝင်၍ ဖတ်ကြည့်ပေးစေချင်တယ် ၊၊ မနက် 11 : 30 အချိန်လောက် ရှိနေပြီ ” လမ်းဘေးက ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့မြေတလင်းပြင်လေးမှာ ( ၇၅ ) နှစ် အရွယ် ၊ အမေအို တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့ စကားမစပ် မေးမိပါတယ်” အမေ” ဒီမှာ ဘာထိုင်လုပ်နေတာလဲ လို့ပေါ့ ။ချိ့နဲ့နဲ့ အားအင်လေးနဲ့ ထကာ ” ကတုန်ကယင် […]
သမထ အောင်ပြီး ဈာန်ရနေတဲ့ နောင်ချို က ဆရာတော် (အများသူငါ ဖူးမြော်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်) ဆရာတော်ဟာ ဝိပဿ နာဘက်ကို မရောက်နိုင်သေးဘဲ သမထနဲ့ဝိပဿ နာကြားမှာပဲ ရှိသေးတယ်လို့ အသိညီမတစ်ယောက်က ပြောတယ် ဆရာတော်ဟာ မှော်ဘီက ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးစီမှာ တရားလာစစ်တာကို အသိညီမတို့ သွားဖူးခဲ့တာ ဆရာတော်ဟာ စိတ်ဖြင့်တစ်နေရာရာသွားချင်တယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းပဲ ရောက်သွားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် Credit Aye Min Naing Unicode သမထ […]
အသိပေးကြေညာချက် ယွန်းဝင့်လွှာအောင် ” Miss Now How 2017 နှင့် ” ရွှေရူပါဦး ” Miss Equal Myanmar 2019 တို့ ( ၂) ဦးအား Missosology နှင့် Missosology Myanmar Organization တို့မှ ရာသက်ပန် တရားဝင် ပိတ်ပင်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည် ။ ယနေ့ အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုကို ထောက်ခံတဲ့အထဲမှာ အလှမယ်၊ […]
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် တင်ပြသည့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်း၏ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် တင်ပြသည့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်း၏ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ (မြန်မာဘာသာ) (နယူးယောက်၊ ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁) သဘာပတိကြီးခင်ဗျား အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener ရဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်လက်ထောက်ခံ ပြောဆိုသွားတာတွေအပေါ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ မြန်မာလူထုကရွေးချယ်ထားတဲ့ NLD ဦးဆောင်တဲ့ အရပ်သားအစိုးရကို ကိုယ်စားပြုသွားမယ်ဆိုတာကို ကနဦးအားဖြင့် တင်ပြလိုပါတယ်။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးပြီးချင်းမှာပဲ […]
ပျံလွန်တော်မူပြီး ( ၁၇ ) နှစ်ကြာသည် အထိ အကောင်းပတိ ရှိသေးတဲ့ ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီး ရုပ်ကလာပ် ( ဖူးမြှော်နိုင်ရန် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်) ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရင်း ထူးခြားလျက် ရှိနေ ဆဲ ပုံတွေပါ ။ အများသူငှာ ဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေး လိုက် ပါ တယ် ပင်းတယ လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ကုံလုံ […]
“ ခွေးအူခြင်းဖြင့် သိနိုင်မည့် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့အတိတ်နမိတ်များ ”…..
“ ခွေးအူခြင်းဖြင့် သိနိုင်မည့် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့အတိတ်နမိတ်များ ” ကပ်ရောဂါနဲ့ခွေးအူခြင်းနိမိတ်ယခုတ‌လောညတိုင်းနီးပါးးခွေးတွေအူနေကြတဲ့အကြောင်းနိမိတ်ကောက်အဟောအမင်္ဂလာမို့မရေးခဲ့တာပါ။မိတ်ဆွေလေးငါးဦးထံတော့ဖုံးဆက်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေး၏၁၁ရက်နေ့ ည၁ ခွဲ ၂လောက်ခွေးတွေ တော်တော်အူပါသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်တွေကအူတာပါဒါပေမဲ့ခွေးအူသံရှည်ကြာစွဲ၍မအူပါ။အူတာတော့ လမ်းမကြီးတွေဘက်ကဟုသာ ကြားမိပါသည်ရုတ်တရက်အူပြီးသိပ်မကြာလိုက်ရပ်သွားပါသည်။ဂရုတစိုက်နားထောင်ကြည့်ပါသည်အသံမရှည်ပါမကြာပါစွဲ၍မအူပါထို့ကြောင့်ပဲ့စင်ကြွေသွားတာတွေ ဖြစ်လာသော်လည်း။ အူသံစွဲရှည်မကြာ၍ ပဲ့စင်ကြွေလွင့်ခြင်းတို့ ဒီထက်သိပ်မများလောက်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။မှတ်ချက် ၁ လမ်းသွယ် လမ်းကြားတွေမှာအူပါကယခုထက်အစများစွာဆိုးတတ်ပါသည်။မှတ်ချက်၂ ခွေးအူခြင်သည်ညည့်၏ ပထမယံကျော် ည၁၀ ကျော်မှ ညည့်၏ဒုတိယယံ ည ၁၂ ကျော်တွင်း သန်းခေါင်ဝန်းကျင် များ၌အူပါကပို၍ကျက်သရေယုတ်၏ဟုအဆိုရှိ၏။ မှတ်ချက်၃ ခွေးတို့သည် အရပ် ၈ […]